Ukunyuka kweMbango yoLungiso lweLavatory engachukunyiswayo Inika abaSebenzi bemibhobho bomthonyama ithemba ngeeNtsuku eziPhezulu Phambili | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / Blog / Ukunyuka kweMfuno yeeNdawo eziLungekileyo ezingashukumiyo yokuNika abaThwali beMveli Ithemba leentsuku eziPhezulu eziPhambili
Ukunyuka kweMfuno yeeNdawo eziLungekileyo ezingashukumiyo yokuNika abaThwali beMveli Ithemba leentsuku eziPhezulu eziPhambili
2020 / 09 / 14 uhleloBlog 6188 0
ISIXEKO SEDALY (KPIX 5) -Ingxaki ngokuhlwa emva kwexesha ukukhangela indawo yangasese evulekileyo yoluntu. Nangona kunjalo kukho isindululo ngoku sokutshintsha konke ukulungiswa. Xa kugqityiwe, kukholelwa ukuba ezi zindlu zangasese ziya kukhuseleka kakhulu.
I-Westlake yokuThengwa okuPhakathi eDaly Metropolis, ethe tyaba malunga neehektare ezingama-40, ineenkampani ezingama-98, ihamba ingachukumiseki kwizindlu zayo zangasese zikawonkewonke.
“Akukho mfuneko yokuba bachukumise into! Zombini iigogo, zombini iitephu okanye izixhobo zokucoca isepha, akukho nto, utshilo uWestlake Kimco onguNjineli weZinto eziNcedisayo uMarlon Bautista.
Ibango elitsha kraca lolungiso olungachukunyiswayo aluzange lukhawuleze, utshilo uPaul Rowe. "Naliphi na ishishini liya kuba nexhala ngenxa yokuba asazi ukuba kuzakwenzeka ntoni," utshilo uRowe. "Nangona kunjalo, ndizive ndingenangxaki ukuba sisokontraktha wemibhobho yamanzi ebesiza kuba nawo umsebenzi."
Ifemi kaPaul iphinde yajolisa, ifumanisa umsebenzi omtsha ngezinto ezikufutshane zokuzivavanya ngenxa yokujongana neempompo. Iimpompo zenzwa yokusondela zineemodyuli ezithile zolawulo lwebhetri ezifanele ukugqitywa iminyaka emi-2, ngokuxhomekeka ekusetyenzisweni.
Ayisiyiyo nje iWestlake yokuFumana uMbindi ngokwenza ugqithiso. URowe ukholelwa ukuba utshintsho luya kwilizwe lonke. “Umboneleli wethu unexesha elinzima lokusinika isixa semali esiyifunayo kwaye ndiyakholelwa ukuba sisiphumo sesizwe siphela esifuna ezi zinto zingachukunyiswayo. Isibonelelo esi kufuneka sihambelane neemfuno. ”
Ukucoca isepha, iitawuli zamaphepha, nayo yonke enye into encinci iyazenzekela.
Uninzi lwethu lukhangela ukutya okanye ukuthatha uhambo eWestlake, nangona kunjalo injineli yezibonelelo ithi izindlu zangasese zikawonke-wonke ziya kuhlala zivaliwe kude kube kugqityiwe ukuphuculwa, kwaye oko kuxhomekeke ekukhawulezeni izixhobo zenzwa yokusondela.
Ngaphambili :: Ikhaya leDepho emnyama ngolwesiHlanu kunye nentengiso yangoMvulo we-cyber ngoMvulo 2020: izivumelwano esilindele ukuzibona-kwaye xa sicinga ukuba ziya kuqala next: Ngaba kufanelekile ukuba wenze i-DIY Yakho yangasese yeSinki esekwe ePennsylvania?
2022 / 01 / 25 396
2022 / 01 / 17 1910